Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ndị na-ebunye ihe - ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na China
Plastic Auto Mold Maka ọkụ azụ ụgbọ ala
Plasti auto ebu maka ụgbọ ala n'azụ ọkụ, injection na 450T igwe. Ịhọrọ ihe ziri ezi maka ọrụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na ịmepụta akụkụ plastik. Site na narị narị ngwa ahịa na resin injinịa dị na ahịa taa, usoro nhọrọ ihe maka plastik…
Akpụkpọ anụ ịgbanye ahaziri maka akụkụ Aoto
Model JS MOULD201011-60 Ihe igwe maka ebu, Plastic maka akụkụ Njirimara nkenke ngwa ahaziri ịgbanye ebu maka Aoto Parts Mold Core 718, DIN2312, 2738, 2344, SKD61, S136, 8407, NAK80 na HRC na Mold. Mold Standard DME, HASCO, JIS, CHINA LKM Standard, MEUSBURGER Mold Base LKM na Hasco na DME ọkọlọtọ (A, B efere 1730,2311,2312, P20 ) Cavity single or multi cavity per request Hot Runner DME, HASCO,...
China injection ebu
Injection ebu bụ ngwá ọrụ nke na-emepụta plastic ngwaahịa; Ọ bụkwa ngwá ọrụ na-enye plastic ya zuru ezu Ọdịdị na kpọmkwem size.Injection ịkpụzi bụ usoro eji na uka mmepụta nke akụkụ na mgbagwoju shapes.Specifically na-ezo aka plastic gbazere site okpomọkụ injection ịkpụzi. igwe…
Ụgbọala ime ime
JS MOLD Mold na-enye ụdị ụgbọ ala ime ụlọ maka ụdị OEM ụgbọ ala mba ụwa. Anyị na-emepụta ụgbọ ala ime ime na mma mma na obere nnyefe. N'ihi na ime ime ịkpụzi tooling, elu nkenke dị ezigbo mkpa dị ka ọnụ ụzọ trims ngwaahịa nwere nnukwu chọrọ na ọdịdị. Anyị.